မနက္ တိုင္း အ သံုးျပဳေန တဲ့ သြားတိုက္ေဆး ရဲ႕ အသံုး ၀င္ပံုမ်ား. – Shwewiki.com
မနက္ တိုင္း အ သံုးျပဳေန တဲ့ သြားတိုက္ေဆး ရဲ႕ အသံုး ၀င္ပံုမ်ား.
ကို ယ္ေတြ ေန႔တုိင္းသံုးေနတဲ့ သြားတုိက္ေဆးဒီလိုအစြမ္းထက္မွန္း အခုမွသိရလို႔ ေက်းဇူးပါ..။
မနက် တိုင်း အ သုံးပြုနေ တဲ့ သွားတိုက်ဆေး ရဲ့ အသုံး ဝင်ပုံများ.
ကို ယ်တွေ နေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေးဒီလိုအစွမ်းထက်မှန်း အခုမှသိရလို့ ကျေးဇူးပါ..။
သွားတိုက်ဆေးကို မနက်တိုင်းသွားသန့်ရှင်း တောက်ပြောင်ဖို့နဲ့ ခံတွင်းန့ံကင်းစင်ဖို့အတွက်ပဲ အသုံးပြုလို့ရတာမဟုတ်ဖူးနော်..
အကယ်၍ လက်မှာ အန့ံအသက်ပြင်းတာတွေကိုင်မိလို့ စွဲနေမယ်ဆိုရင်လည်း သွားတိုက်ဆေးနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်လိုက်တာနဲ့ အနံ့အသက်ကင်းစင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
လူတစ်ယောက်မှာ မျက်နှာပြီးရင် လက်သည်း၊ ခြေသည်းတွေဟာလည်း လှပနေဖို့ အရေးကြီးဆုံးထဲမှာ ပါပါတယ်။သွားတိုက်ဆေးနဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းတို့ကို သွားပွတ်တံ (သို့) ဂွမ်းစလေးနဲ့ ၅ မိနစ်ခန့် ပွတ်တိုက်ပေးပြီး ရေဆေးချလို်က်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုလှပတောက်ပြောင်တဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ..။
အ ငယ္ဆုံး သား သမီးေလးေတြဟာ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ မယ့္ သူေ တြျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့ လာေတြ႕ရွိ